मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर त प्रयोग गर्नुभएको छैन ? ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ – Online Bichar
Online Bichar 14th September, 2020, Monday 7:36 AM
काठमाडौं, २९ भदौ । धेरैजसो अवस्थामा हातबाटै भाइरस संक्रमण हुन्छ। आफू होस् या अरूमा। त्यही हातलाई संक्रमणरहित बनाउन घसिने स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन मेथानल मिश्रित रहेछ भने के होला ? त्यसमाथि बच्चाको हातमा प¥यो भने ? यो जिज्ञासामा चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।